80% latsaka CO2 miaraka amin'ny biofuel fandoto | Fanavaozana maintso
Daniel Palomino | | Biofuel, Angovo azo havaozina, About us, Teknolojia vaovao
Seza sy Aqualia fiaraha-miasa miaraka amina orinasa marolafy tarihin'ireto roa ireto hanatanterahana izany ahena 80% ny famoahana CO2 vokarin'ny fiara lasantsy. Ny hevitra dia ny fampiasana rano fako ho an'ny biofuel.
Ary izany tokoa ozinina fitsaboana manadio ny rano ilaina mandritra ny herintaona hamelana fiara iray no nanodidina ny tanyHatramin'ny fihodinana 100 araka ny tokony ho izy, izany dia mihoatra ny dia eran'izao tontolo izao.
Niantso ny fandraisana andraikitra Tetikasa FIAINANA + Methamorpohis mipoitra amin'ny hevitra hihaonana tanjona lehibe sy mazava roa:
Manararaotra araka izay azo atao ny loharanom-pahalalana vitantsika eto ambonin'ny planeta tahaka azy Rano. Vitsy? Eny, raha tsy manana ny angon-drakitra ianao dia 2,7% amin'ny rano misy eto an-tany ihany no madio sy an'io isan-jato kely io 1% ihany no azo ampiasaina.
hampihena be loatra fandotoana ateraky ny fifamoivoizana, indrindra any amin'ireo ivon-tanàna lehibe, miloka amin'ny angovo hafa.
Ireo orinasa voalaza etsy ambony ireo dia maniry ny hahatratra ny "revolisiona amin'ny fivezivezena an-tanan-dehibe sy ny fampandrosoana ny tanàna ho avy" ary noho izany dia tsy ampy ho azy ireo ny mampiasa biofuel amin'ny alàlan'ny biomassa fa mandroso lavitra.
FIAINANA + Methamorpohis manana hevitra mazava momba ny fahefana ovay ho lasa biofuel ny rano maloto.
Noho izany, Ireo rano ireo dia tsy maintsy mandalo fizotran'ny fanamasinana, fanamasinana ary fampiroboroboana farany ka ny biogas dia vonona hampiasaina any aoriana.
1 Fitsaboana rano maloto
2 Vokatra sy famatsiam-bola
Fitsaboana rano maloto
Ny tetikasa dia manolo-kevitra ny ho afaka mampiseho rafitra roa amin'ny fitsaboana rano maloto Misy ifandraisany amin'ny ambaratonga indostrialy: ny prototype an'i Methagro sy ny prototype Umbrella.
elo dia hanatsara ny fanadiovana angovo ny rano amin'ny fitsaboana ny ny sombintsombin'ny organika voafantina tamin'ny alàlan'ny fampiharana ny dingana anaerobika (tsy fisian'ny oxygen) ary autotrof (zavamiaina afaka mamolavola ireo zavatra ilaina rehetra ilaina amin'ny fifandraisan'izy ireo avy amin'ny akora tsy mamboly)
Réacteur membrane anaerobika (AnMBR) ary ny rafitra Anammox ELAN ny fanesorana azota manototra.
Farany, ny biogas vokarina dia tsaboina ao amin'ny rafitra fanadiovana sy fanadiovana ABAD, ny biomethane azo dia hamela ny fanombanana ny fako amin'ny fampiasana fiara amin'ny alàlan'ny fanarahana ny fenitry ny fiara DIN 51624.
Ity prototype ity dia haseho ao amin'ny foibe fikarakarana fako monisipaly ECOPARC any Montcada i Reixac, ao amin'ny faritra Metropolitan Barcelona.
Methargo manana ny tanjon'ny manome vahaolana ho an'ny taranaka slurry tsy voafehy.
Miaraka amin'ny rafitra fanatsarana izay mifototra amin'ny membrane sy fampiasana mivantana eo amin'ny sehatry ny fitaterana na ny fampidirana azy ao amin'ny tamba-jotra fizarana gazy voajanahary.
Ity prototype ity dia natao hapetraka ao amin'ny orinasa Porgaporcs agri-sakafo ananan'i Ecobiogas ary 35 km miala an'i Lleida no misy azy.
Vokatra sy famatsiam-bola
Fiara Fiaramanidina FCC Tontolo iainana dia hanao fitiliana maherin'ny 120.000 km ny totaliny hizaha toetra ity bioloela ity ary hahazoana ny valiny, manantena fa ho afaka hanana an'io solika solika sy ekolojika io ankoatran'ny Espaniola 100% araka ny nohamafisin'ireo mpanentana azy
Raha sendra nandrasana ny fandinihana dia afaka mampiasa azy ny fiara entona voajanahary voafintina.
Ny FIAINANA + Methamorpohis dia famatsiam-bola amin'ny alàlan'ny fandaharam-PIAINANA ao amin'ny Vondrona eropeana na dia mbola misy bebe kokoa aza, ankoatry ny Aqualia sy seza, misy ihany koa ny consortium voalaza etsy ambony izay ahitana ny Catalan Energy Institute sy ny Barcelona Metropolitan Area na Gas Natural, ankoatry ny hafa.
Ny tombony amin'ity biofuel vaovao ity dia mazava be, raha misy zavamaniry mitsabo manodidina ny 10.000 metatra toratelo isan'andro biomethane dia azo alaina amin'ny fiara 150 hahafahanao mivezivezy zato km isan'andro sy amin'ny fiara.
Any Espana dia 4.000 hekitometra toratelo no diovina rano isan-taona ka ny fiara afaka mivezivezy amin'ny rano maloto amin'ny alàlan'ity tetik'asa ity dia lasa mpankafy be ankoatran'ny fihenan'ny gazy entona.
Noho io antony io dia manana fanantenana betsaka amin'ny mpamily solika hafa ny mpamily.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Angovo azo havaozina » 80% latsaka CO2 miaraka amin'ny biofuel rano maloto